Stéphane Plaza mumutambi weJena Vests: "Anotitora senjiva" - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Stéphane Plaza mumucheka mutsvuku collimator: "Anotitora senjiva"
Kubva kune muparidzi anozivikanwa kusvika kumugumo wepamusoro-soro? Zuva rimwe nerimwe, vataridzi vakawanda vanotarisa mapurogiramu maviri emapurogiramu e Stéphane Plaza paM6, kureva, Imba inotengeswa uye Tsvaga imba. Kunyange zvazvo vamwe, vanovhiringidza maitiro echinyorwa chekugara, uye kunyanya ... zvipfeko zvejena. kana Stéphane Plaza rinotsanangurwa, rinoshuma The Point "Ndechokuti inobatsira kukwidziridzwa mitemo yekushandisa uye nokudaro kunzwa kwechikamu chose chevanhu vasingagoni kuwana hupenyu hwakanaka hwekurarama", tsanangura vashandi vedu, kubva pachiyero chechikoro cheOfop chokutsvaga "Farira kune boka guru riri pakati: tsvina yakaita njodzi".
"Plaza inotitora senjiva. Anofunga kuti munhu wese anogona kukwanisa kunyura kaviri, asi isu hatigoni kuva nechikwata chekubhadhara imba yekugezera. Isu hatisi nyika imwe chete ", rinotsanangurawo zvakare Didier, jira rakachena reSeine-et-Marne kusvika nguva, panguva Ouahiba, Vest yellow yellow Montreuil inoshora kukurudzirwa kwe"Nzira yehupenyu yeAmerica [nzira yekuFrance yeupenyu, chinyorwa]" pamwe chete "Asingawaniki" kune vamwe.
"Handifungi nezvekutengesa hope"
Stéphane Plaza iye, zvisinei, haasati aita seanoona zvinhu nenzira iyi uye anozviona iye se "Mumwe munhu akakurumbira". Kana iye achiwanzoti amai vane florist, baba vari kumhanya mumhanyi Tour de France, uye vakati vanorarama mumutemo we 37 mita mamita Carrez, mutariri anovimbisa kuti kuparidzira kwake "Taura kune wese". "Handina kumbobvira ndatsoropodzwa nekuratidza zvinhu zvisingachagoneki. Handifungi kuti ndiri kutengesa hope. Ivhareji yemari yemisha yatinotengesa ndeye 350 000 euros. Rinoramba rakarurama ", anotsanangura mutevedzeri nguva.
Zvisinei, kana kubudisa kwayo kunoratidzika kujekesa kune imwe simba rekutenga zvakanyanya kwazvo kwavari, Stéphane Plaza iye ane "Kuziva zvinhu zvinokosha". "Pandakaona kuti takakwanisa kukwira mabhiriyoni maviri emazuva maviri kweTe Dame, ndakanga ndisinganyari. Ndingadai ndakasarudza kupa mari iyi kune micheka yemajena ", anochema nguva.
© Pierre Perusseau / Kuwedzerwa
Stéphane Plaza - 3e Charity Gala ye "Stethos d'Or" iyo inopa mubairo vanyori vanobatsira
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/stephane-plaza-dans-le-collimateur-des-gilets-jaunes-il-nous-prend-pour-des-pige-970051